Ukusebenzisa okwakhiwa ngalo la mabhodi ekwakheni izindonga, igumbi abahlukanisi noma nezinye izinjongo phakathi ukulungisa, ngokuvamile kudingeka ukuba ukuqhuba futhi izintambo zikagesi ukuze amandla floodlights, izibani, enethiwekhi futhi ukushintsha ukwenza. Uma uthi nhlá, amashenanigeni ezinjalo kungase kubonakale kancane kuyinkimbinkimbi, kodwa azikho izinkinga ngisho imfundamakhwela omakhi self-wafundisa khona uma kungavela, okubaluleke kakhulu, ukuthi liphume kanjani nokuthi yini okufanele uyenze.
Ngakho kanjani uzibekela Enclosure ngoba plasterboard? Lo mbuzo ingenye ezivame kakhulu phakathi ukulungisa, futhi manje sizophendula, kanyekanye kokuba zaveza yonke imininingwane kanye nezinkinga kungenzeka yale nqubo.
Kukhethwa Escutcheon impahla
Ngakho, Enclosure ngoba plasterboard Yiqiniso, athé ukwehluka kulawo esetshenziswa phakathi nokufaka ugesi ukhonkolo noma isitini. umehluko ngokuyinhloko yokuthi yikuphi ukusetshenziswa ngokhonkolo nezinye izindlela ukuzizuzela Escutcheon futhi ukushumeka ayidingekile. Plasterboard izindonga azinalutho noma, njengoba besho, okungenalutho.
Ngakho, ngokukhetha podrozetnik ngaphansi okwakhiwa ngalo la mabhodi, kumelwe sizinake yokuthi yenziwa noma iyiphi impahla. Inketho ezivamile nengabizi iyona plastic evamile, kodwa wiring nokusetshenziswa lezo zimali kubhekwa ezingaphephile, futhi ngesizathu esihle. Lesikahle ngeke podrozetnik plastic self-zokucisha ngamunye. idivayisi ezinjalo ngaphansi isekhethi noma wiring umlilo uqala zigcwale amanzi futhi luvutha ngsivinini ukuthi plastic evamile.
Ngokuphambene, inqubo amandla omlilo izomiswa ngazo zonke izindlela, futhi ube nesikhathi esihle, ngisho noma inkinga engathí sina, umnikazi kuyodingeka isikhathi okufanele sisabele ngayo lapho iphunga ongaziwa ezavela endlini ngaphambi okuzokwenzeka ungalungiseki. Ngaphezu kwalokho, okwakhiwa ngalo la mabhodi ubuye impahla oluvuthayo, futhi kunengqondo ukukhetha Escutcheon ongakusho ukusiza.
izici D Enclosure
Enclosure ngoba plasterboard osayizi nazo ezahlukene, ukuze uma sinqume ngendaba, kungenzeka ukwenza izilinganiso. Lapha ukunakekelwa okufanele zikhokhelwe isikhala ipharamitha ngaphansi uyibhala okwakhiwa ngalo la mabhodi, okungukuthi, udonga ingaphakathi. Escutcheon ejwayelekile ibanga amamilimitha angu ezingaphezu kuka-50, okungukuthi self Escutcheon plasterboard ngokuvamile okutshalwe 45-50 mm ukujula. Ukuze nesilinganiso olunembile wena kuphela kudingeka acabangele ukushuba we ishidi okwakhiwa ngalo la mabhodi kanye nebanga elivela ubuso bayo odongeni kwangaphakathi. izibalo ezinjengalezi abazenzi usebenzisa roulette ezivamile, futhi imiphumela kufanele ukuya emakethe noma hardware esitolo, lapho ziyoyizwa imininingwane ukucushwa kunesidingo.
Ngokuqondene nazo zonke ezinye izilinganiso kanye nezici, bacasulwa kusuka lapho uphuma khona udonga noma switch ukukhanya, ngakho kukhona cishe lutho ungasho oyikhethile, kungcono ukuthatha njengoba uthenge into futhi ngihambe naye siyoqhuba esitolo okukhethekile.
Ukufakwa Enclosure futhi ngaphambi ukupheka wakhe
Njengoba kwenzeka ngeningi umsebenzi wokwakha, okubonakala okwakhiwa ngalo la mabhodi ngaphambi kokufakwa Enclosure kuzokwethulwa okwakhiwa ngalo la mabhodi, kufanele wenze ezinye zokukhwabanisa odongeni. Ukuze wenze lokhu, okokuqala udinga Putty futhi uhlobo olukhethekile primer olukwazi bakhulelisa ishidi Gypsum.
Ngakho, zonke izenzo kwenziwe izofakwa e amaphuzu ambalwa:
Ukuze uqalise kufanele iphathe wodonga olungaphezu primer bese ulinda kuze kube yilapho wakwamukela futhi uDries. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa ezivamile ukwakhiwa roller futhi akavumi ukuba noma ibuphi ubunzima ngisho imfundamakhwela Umakhi.
Ngemva primer bomile sekuyisikhathi sokuba Putty. Kufanele sisebenzise wonke spatula netolstym ungqimba, ukuze anikeze uyibhala okwakhiwa ngalo la mabhodi ukuqina mkhulu futhi ukugwema ebhidlikayo ngesikhathi Drilling imigodi Enclosure.
Isinyathelo sokugcina wokugubha ebusweni okuyiwona uzodinga Enclosure yakho ukuze plasterboard. Ngokuvamile, ububanzi imbobo uyalingana 45 kwangu, kodwa amacala zihlukile kanti kungcono ukwenza isakhiwo, isicelo amabhokisi imodeli odongeni ukufakwa uthenge.
Uma umsebenzi wokwenza amalungiselelo ngesimo ukucutshungulwa izindonga umgwaqo Ukumaka sekuphelile, sekuyisikhathi ukuqala izimbobo imishini. Kuze kube yimanje, isixazululo esingcono kakhulu kuzoba abe okunamathiselwe ekhethekile sokuprakthiza, ngawo yamba kalula emgodini ubukhulu edingekayo, kodwa uma kukhona amadivayisi ungenayo, kuyoba okwanele ukuthenga evamile ezinkulu-ububanzi sokuprakthiza kancane futhi ube Ukugunda ummese obandayo. Ngala mathuluzi, ungakwazi kalula ukufaka Enclosure ngoba Gypsum, into eyinhloko kule ndaba, khumbula ukuthi imbobo kufanele ngokuqinile inikezwe ubukhulu kanye isici esidayisa iwukuba uyifake ngemuva, indlela kuphela ukufeza nenkanuko edlulele kanye ukulondeka okwanele.
Manje ukuthi konke sekumi ngomumo futhi izimbobo basuke yamba, ngamazwi ambalwa singalithola kanjani iphuzu podrozetnik e okwakhiwa ngalo la mabhodi futhi sibheka ezinye zezici nomklamo walo.
Iqiniso lokuthi yonke imininingwane yalolu hlobo has a 4 umshudo. Bobabili ngqo obhekene ukulungisa esidayisa uthenge, nabanye ababili ukuze rigidity Escutcheon kokungathembeki. Okwamanje, kudingeka ke ezimbili zokugcina umshudo.
Ukuze ukukhweza kahle Escutcheon, udinga ukuhamba elula kodwa qaphela ukuba uyicindezele emgodini lelungiselelwe futhi uqale ukuphotha ukufakwa kokumqoka kuphela cruciform ngenhla ngezikulufo ezimbili. indlela yabo yakhelwe ngendlela ukuthi ekujuleni kubo abethela emalungeni ekhethekile (amathebhu), lolo ngesikhathi sokuhlwanyelwa usezinhlelweni zokuqinisa ukuqala ukuhambisa eduze ngentambo ekufezeni Escutcheon, ngaleyo ndlela kuyisunduzele ukuba ishidi okwakhiwa ngalo la mabhodi, ekuqinisekiseni kufanelekile Friend. amalunga omzimba ezinjalo kokubili metal and plastic, kodwa ngalesi sikhathi akuthinti amandla nenkanuko edlulele.
By the way, ngaphambi kokuhlela podrozetnik e okwakhiwa ngalo la mabhodi kuzophela futhi qinisa umshudo ezimbili, ukuvikela podrozetnik, ungakhohlwa unamathela wire kuwo, ezizohlinzeka amandla esidayisa noma shintsha.
I kabusha lensha yekubusa ezisemadolobheni, izizathu izinguquko yesibili wayebizwa.